Sida loo Guba Lugood Movies in DVD on Mac / Win (Windows 8 ka mid ah)
> Resource > Beddelaan > Sida loo Guba Lugood Movies in DVD ee Mac / Win (Windows 10 ka mid ah)
Lugood waa habka ugu wanaagsan ee ay u buuxiyaan aad iPod iyo iPhone la music ugu dambeeyay oo weyn, filimada, barnaamijyadooda, iwm Dhawaan inkastoo, dad badan u malaynayaan inay gubi files Lugood si ay u ciyaari kartaa filimada Lugood ama music on TV iyo DVD ma ahan oo keliya ku saabsan on Apple TV, iPod, ama iPhone. Ka sokow, Lugood in DVD gubanaya sidoo kale waa hab wanaagsan oo gurmad faylasha aad saxaafada ka xoq.
Tutorial Tani waxay ku tusi doona sida ay gubaan filimada Lugood in DVD la gubi qalab dhan-in-ka mid ah DVD - Wondershare Video Converter (Windows 8 taageeray), kaas oo kaa caawinaysaa in aad loogu badalo Lugood in DVD si fudud oo dhaqso.
1 dar Lugood Movies
Riix ah "Add Files" button dusheeda ka tagay si ay caleenta ka your computer ku darto video files aad rabto in aad ku gubi. Waxaad kale oo jiidi karaan jeedi videos in ay leeg- tahay khayraadka inay ku shuban videos for gubanaya. Ka dib markii loading video, waxaad riixi kartaa batoonka edit in ay dalagga, isku shaandheyn, ku dar watermarks, iwm sida aad jeceshahay. Hoos waxaa ku qoran halka aad ka heli kartaa filimada Lugood by default in Windows iyo Mac.
Mac OS X / Users / username / Music / Lugood /
Windows 8 : C: UsersusernameMy MusiciTunes
Windows XP , C: Documents iyo SettingsusernameMy DocumentsMy MusiciTunes
2 Habee DVD menu (Ikhtiyaar)
Guji "Change Template" button dhinaca midig si uu u furo Lugood ay u saaxir DVD ku gubanayso. Tallaabada ugu horreysa waa in aad dooratid DVD menu jecel, ama qarka u jeeda music gaar ah iyo sawirka. DVD aan menu ayaa sidoo kale taageeray. Just dooro No template Menu oo guji "Ok" button.
3 bilow si ay u gubaan filimada Lugood in DVD
Hadda noqon tallaabada hore ka hor inta gubanaya ee movie Lugood DVD. Halkan waxaa aad si loogu badalo aad videos in disc DVD, DVD folder ama file ISO awoodi. Marka dhan ayaa ku dhameysatay, guji "Guba" badhanka hoose si ay u gubaan filimada Lugood in DVD. Video Converter waa mid aad u hufan oo buuxin doona si toos ah gubasho aad u dhakhsaha badan.
Talooyin : Video Converter sidoo kale kaa caawinaysaa in aad si loogu badalo video iyo Cajalado, diinta DVD qalabka aad, oo uu u ciyaaro kasta oo gebi ahaanba files warbaahinta in Windows (Windows 8 taageeray).